Ngesisekelo imithetho eyinhloko okhethweni endlini engezansi Federal Assembly, evunyiwe Februwari 2014 nguMthetho Federal, zamaphini kuziphathimandla ezifanele we Russian Federation ayokhethelwa izakhamuzi ngokusebenzisa ilungelo lokuvota jikelele, alinganayo futhi imfihlo. ukhetho lwephalamende eRussia akudingekile ukuba iqhaza, izakhamizi zikwazi ukwenza izinqumo zabo mayelana nomhlangano isidingo ngabo sokuba ukhetha ukhetho.
Izimiso uhlelo lokhetho we Russian Federation
ukhetho lwephalamende eRussia ziyabonisa futhi ukhetho 450 amasekela.
Half of the ngenhla, inani lamaphini akhethwe onomzali igunya abajameli, isimiso esikweyoku-1 1st nesekela wesifunda.
Eyesibili babo kukhethwa federal wesifunda yokhetho kusukela isimiso njengobunengi bemiphefumulo ngokulingana nenani lamavoti.
Anikeze izwi ikhandidethi emthethweni WaseRussia isakhamuzi ngubani attained iminyaka eyishumi nesishiyagalombili ubudala ngesikhathi ukhetho.
isakhamuzi Russian unelungelo lokukhetha ikhandidethi e onomzali igunya abajameli, uma ebhaliswe wabavoti izinyanga ezingaphezu kwezingu-3 ngesikhathi sokuvota.
isakhamuzi Russian ubani ilungelo lokuvota, bangahlanganyela ukuqokwa yabakhona umzimba efanele, ukwenza uhlu yabakhona iqhaza umkhankaso esisemthethweni ukuze bagcine ukhetho nokumiswa imiphumela yokuvota.
Kwesokudla kumele zikhethwe isekela yendlu engezansi Assembly Federal oyisakhamuzi Russian ofinyelele engamashumi amabili nanye.
Imingcele Asivumeli ukunyuswa ukhetho
A ukuboshelwa cala ifomu sina noma sina ngokukhethekile.
Ukubuyisela imali noma ukususwa ukuboshelwa ubugebengu obenziwa kakhulu, uma enecala kwasuswa eminyakeni engaphansi kwengu-10 edlule. Lapho ifomu sina ngokukhethekile kwegama elithi luyanda iminyaka engu-15.
Ngaphandle ongaphambi izimangalo, abalahlwa ngamacala ngomsebenzi ziyingozi.
Ukuba khona iminikelo ikhandidethi, amagugu kanye amafa amabhange amazwe angaphandle, okuyinto zitholakala ngaphandle Russia.
A ikhandidethi kungenzeka okhethwe kuphela uma kwenzeka ukuthi imigomo kuboniswe esigabeni 2 siyophela ngaphambi kosuku lokuvota. Ngakho, uma ubugebengu izimisele ifomu ehlukile kunaleyo bavumelana ngenhla kufanele bakhethwe ukuba isakhamuzi ibuyisela ngokushesha ngemva ukuvuthwa ngokuqiniseka.
Izigaba inqubo yokhetho
Ukusungulwa ngosuku lokuvota.
Ukuhlanganiswa Umvoti uhlu.
Oqokiwe yabakhona emagunyeni afanele futhi ukubhaliswa kwabo.
Umkhankaso wokhetho nokuyaluza.
Empeleni inqubo yokuvota.
Nokubala kushicilelwe imiphumela yokuvota.
ukhetho lwephalamende eRussia - ingxenye esiyisibopho inqubo yokhetho. Ukhetho uqoka UMengameli obambile we isimo phakathi nekhulu namashumi ayisishiyagalolunye eziyishumi ezandulela ukuvota. Ukuvota usuku nakanjani imele ngeSonto, ngalesi sikhathi umnqamulajuqu we nomhlangano odlule.
Isinqumo sikaMongameli Yokuqashwa yokuvota ngeke amenyezelwe umthombo esemthethweni phakathi nezinsuku ezinhlanu. Esimweni lapho umongameli eyisibopho ngendlela esifike ngesikhathi linganikeziwe imihlangano ukhetho, lokhu amandla sihamba CEC. IKhomishana uzoqoka ukhetho ngeSonto lokuqala lwenyanga, lapho igama elithi iphela umhlangano. Isinqumo CEC kubuye kuncike ncwadi, kodwa kungakapheli izinsuku ezingu-7 ngemva nomqondo isixazululo.
Ukhetho singasetshenziswa eyabelwe NgeSonto elilandelayo, uma ngoMgqibelo kwathiwa ngeholide noma ngeSonto losuku yamemezela ngendlela ebekiwe ngokusemthethweni okusebenzayo usuku jikelele.
Ukuhlanganiswa Umvoti uhlu. Oqokiwe ukhetho ukubhaliswa kwabo
yilelo naleloqembu lezepolitiki iqhaza kule nqubo, kumele liqokwe uhlu federal, okuyinto inezingxenye 2: jikelele yombuso kanye lesifunda (ingxenye 1 engashiywa). Uhlu federal sehlukaniswe iinqhema zesifunda ukhetho. It is wadala ukuze bakwazi ukuvota ababezobhapathizwa ngokwabo. Kulokhu, uma leli qembu uwina izihlalo Duma ngokuyinhloko zamaphini kukhona ukhetho owanika yisibalo esikhulu sabasebenzi esingakaze amavoti.
Uhlu federal is ihlanganiswe ngu lokuqoqa amasignisha abavoti '. Iqembu uhambisa uhlu CEC futhi ezinsukwini ezingu-10 soMthetho weKhomishana uthembisa ukumemezela isinqumo sokubhalisa. Uma Central Ukhetho Commission nerejista ohlwini, ngamunye kulabo abazobhapathizwa esiqokiwe ohlwini, unikezwa isimo umfundi obhalisiwe futhi ezidinga ilungelo ikhathaze umsebenzi.
Kumiswa izifunda yokhetho zokuvota
Ukuze inqubo yokhetho eRussia kudala 225-ilungu elilodwa izifunda. WezeFundo wesiFunda kanye komngcele walo kunqunywa isekelwe inani kubhalise abavoti. Single-igunya abajameli ngaphambi ukhetho ngalinye kabusha wadala ngenxa ukunyakaza asebenzayo sabantu.
izikhungo zokuvota zidalwe kangangokuthi babengakwazi abavoti akukho kuka 3,000. Izinhlu Umvoti ihlanganiswe indawo, bese abantu bhalisiwe ensimini ka esiteshini senceku.
Ukhetho ePhalamende ngo-2016 zaseRussia zamemezela ukuthi imithetho emisha ze njengoba wabiza ngumengameli zamanje.
Manje uvinjelwe umfanekiso abaqavile emphakathini nganoma iyiphi izinto mkhankaso. Ngoba kuphambene nokwenza kwamazwe omhlaba. Izinto walolu hlobo alikwazi amamitha 50 kusukela esiteshini sokuvotela namasiko izindawo, izikhumbuzo zomlando kanye esikhumbuzo yezakhiwo.
Abafakizicelo kudingeka iqhaza mpikiswano: kukhangisa ngethelevishini.
ukhetho lwephalamende eRussia kwakusho ivoti kusukela 8 ekuseni kuya ku-8 ntambama ngosuku esimisiwe. Isikhathi kungenzeka lihlehliselwe for lungene 2 amahora amacala bavumelana. ukhetho lwephalamende eRussia 2016 akuyona kubekezelelwe iyiphi ingxenye.
Ngezinye 20 ezimpondweni nesikhathi sendawo iqala ngokubala amavoti emva ivoti simemezelo usihlalo consummated salo msebenzi. Kodwa ngaphambi kokuqala ukubalwa amalungu ikhomishana kufanele uhlole ubuqotho kunezimvu zamanzi, ukukhomba kwephula umthetho futhi amavoti ayivumelekile. Ngemva ukubala amavoti idwetshwa Imiphumela ukuvota khona kulabo ababebukele.
Zonke imibiko etholwe CEC, lapho imiphumela kubalwa we ukhetho lwephalamende eRussia, okuyinto kumele lushicilelwe emasontweni 3. Ukugcina le nqubo kuyinto umthetho wokweshumi.
Imiphumela ukhetho ePhalamende eRussia ngo-2016 wabonisa aphakeme ubuholi "United Russia" party. Ngaphezu kwalokho, Duma, ngaphandle EP abameleli babe 3 nezinye izinhlangano (singabali amaqembu ukuthi iwine iphesenti elincane igunya). Amaphathi bekakhona - KPRF, LDPR futhi "Fair Russia".
Inqubo yokhetho eRussia kunzima, ehlanganisa inqwaba izigaba ukuthi njalo esikhanyayo. Ngakho-ke, ukhetho ePhalamende eRussia, imiphumela ngokuvamile nkomoni.
Umbusi Kostroma esifundeni Sergey Sitnikov biography, amaqiniso ezithakazelisayo, izithombe
Isimiso sezombangazwe Russia 19-21 eminyaka. Abavelele osopolitiki Russian